Biyo La’aanta Deegaanka Leego Ee Sh/hoose Oo Ka Dartay – Goobjoog News
Maamulka deegaanka Leego ee gobolka Shabellaha Hoose, ayaa sheegay iney ka dartay biyo la’aanta baahsan ee ka jirta deegaankaasi iyo sidoo kale deegaannada ku dhow.
Guddoomiyaha deegaankaasi Abukar C/laahi Isaaq oo la hadlay Goobjoog News, ayaa sheegay in ay aad u adag tahay helitaanka biyo ay dadka cabaan, iyadoo sidoo kale ay intaasi dheertahay saameynta abaarta.
Dadka qaar ayuu sheegay in biyaha ay ka helaan meelo fog, mararka qaarna loo keeno biyo aan nadiif ahayn.
Guddoomiye Abukar ayaa sidoo kale sheegay in abaarta ka jirta dalka ay sidoo kale dhankooda saameyn xooggan ku yeelatay oo ay ku baxeen dad iyo duunyo waa sida uu hadalka u dhigaye.
Ugu dambeyn guddoomiyaha deegaanka Leego ee gobolka Shabellaha Hoose, Abukar C/laahi Isaaq ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iyo cid walbo oo wax awoodda iney gurmad biyo dhaamin ah iyo mid raashiin ahba u sameeyaan shacabka ku dhaqan deegaankaasi.
Xildhibaan Afarale Oo Puntland Ku Eedeeyay Dhibaateynta Dadka Kasoo Jeeda Gobollada Koonfur Ee Ku Nool Deegaannadooda
Xildhibaan Xaabsade “Mooshinka la keenay ma ahan sharci, waa mid ka yimid madaxtooyada” (Dhageyso)
Shirkii arimaha qaxootiga ee Addis-ababa oo soo gebagaboobay
Aatoee lgilux viagra 100mg cialis no prescription
Xjpdlw jbsvhk Order viagra us where to buy cialis online
Mkahfv kmyqml Get cialis online pharmacy
Gpipdn cpcxyg free viagra sample...
Hjmbcy ekrnqt over the counter viagra...
Zwbimk ywinws viagra soft cheap price...
prescription drugs Cipro pain medications without a prescrip...
errectile dysfunction cheap Prednisone best cure for ed...